musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Brand USA Inochengeta India pane yayo Virtual Radar
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Chiumbwa cheRusununguko chakaonekwa kubva kuCircle Line chikepe, Manhattan, New York
Musika weBrand USA wepasirese wakasarudzika munzira dzakawanda, kwete hushoma hwacho hwakaunzwa mune meseji inonzwika uye yakajeka kune veIndia vanofamba pamwe nevekushanya kuti United States yakatsunga kudzosera musika weIndia, kana rwendo rwadzoka panzvimbo, tumira COVID.
Brand USA yakaitisa musangano chaiwo muna Nyamavhuvhu 11, 2021, nevatungamiriri veIndia vanofamba pamwe nekushanya.
Yakasimbiswazve neBrand USA kuti India yakagara iri pairi radar.
Vaviri vamiriri veUSA neIndia vakamirira nemoyo wese kuenda-mberi mukufamba, kushanya, kubhururuka, kugamuchira vaeni, chero chaunoda kuitumidza.
Kunyangwe panguva yeCOVID, iyo USA yakachengetedza chirongwa chayo chekuziva nezve zviri kuitika muIndia. Muhurukuro muna Nyamavhuvhu 11, 2021, iyo yakaunza pamwechete, muchikuva chaicho, vatungamiriri vepamusoro vekushanya uye vekushanya kubva kuIndia, Brand USA yakakurukura chinangwa chayo chekusimudzira nekutengesa USA muIndia. Brand USA yakasimbisazve kuti India yakagara iri pairi radar, uye varatidziri pamusangano vakapa chokwadi uye manhamba ekuyeuchidza vaoni kuti nhamba dze pre-COVID hadzizongosangana chete asi dzinogona kuvapfuura.
Pamberi pekubatanidza kumberi, zvinhu zviri kuvandudzika nedzimwe ndege munzvimbo, zvakare, kana kuenda-kumberi kwauya kuburikidza. Vakuru vakuru veBrand USA vaivepo kuudza vatambi veIndia kuti pane zvakawanda zvakafanana pakati penyika mbiri kusimudzira kufamba. Rutivi rweIndia rwemusangano chaiwo rwakatungamirwa naSheema Vohra uyo akatungamira kwenguva refu kukwidziridzwa kweUS muIndia.
Kufamba Kwekutengesa Kudzidziswa
Kuburikidza neBrand USA, iyo yekuhwina-kuhwina USA Discovery Chirongwa yakawedzera 64% mukuenzanisa kwegore-pagore. Chirongwa ichi chinopa mawebinar anodzidzisa uye anokurudzira uye akadzidzisa vamiririri 10,113 kubvira 2020 kusvika nhasi.
Muna 2019, mamirioni 1.47 Indian vashanyi Akaenda kunoona United States, achipa mabhiriyoni gumi nemana emadhora kuhupfumi hweUS. Vashanyi vhoriyamu kubva kuIndia yanga iri pasi 14.2% muna 77 kutarisana ne2020, nepo mari yaive pasi 2019%. MunaJune 45, huwandu hwevatorwa vekune dzimwe nyika vanofamba nendege pane zvisingamiriri kubva kuIndia kuenda kuUS zvakadzikira 2021% zvichienzaniswa naJune 59.
India Yevashanyi Mbiri
Mugore chairo, nyika gumi neshanu dzinowana 18% kana kupfuura ehuwandu hwevashanyi veIndia vhoriyamu. Izvi zvinotsigira kuyedza kweBrand USA kukurudzira kuenda kune dzimwe nyika kumaruwa kana kunzvimbo dzinozivikanwa zvishoma muUnited States sekudikanwa neMutemo Wekufambisa Wekufamba. 2% inoshanyira nyika imwechete panguva yekushanya kweUS, iyo inofananidzwa ne63% kune dzimwe nyika dzekunze. Pakati peanofungidzirwa mamirioni gumi nematanhatu emakamuri husiku akaunganidzwa mu76, India inoisa chechina kumakamuri mazhinji husiku mumisika yese. Wepamusoro chinangwa chikuru cherwendo bhizinesi pa13% yevashanyi vese muna2019 - danho rakapetwa katatu kupfuura avhareji kune dzimwe nyika dzekunze. Zvimwe zvinangwa zvikuru zvekufamba zvinosanganisira VFR (kushanyira shamwari nehama); zororo / zororo; uye musangano, musangano, kana kutengeserana kuratidzira kutora chikamu.
Mukuvhara musangano chaiwo, pakanga pasina mhinduro yakajeka kumubvunzo wakakosha: Virtual ichagadziriswa riini neyechokwadi?